Fulbaana 20, 2019
Gama biraan hidhamtoonni lakkoobsi isaanii hin himamiin torbanuma kana keessa gad-lakkifamuun beekamee jira.
Haaluma wal-fakkaataan Godinaa Horroo-Guduruu Wallaggaa, aanaa Amuruutti namoonni hidhamuu jiraattonni hagi tokko himanii jiran. Bulchaan Aanichaa, Namootni hidhaman akka hiikaman murtaa'ee jira, jedhu.
Gama biraan namoonni yaroo adda addaatti “Leenjii haaroomsaa” jedhuun Mooraa Leenjii Poolisii Sanqalleetti walitti qabamaa turan keessa hagi tokko gadi dhiifamuun himamee jira. "Yeroo achi turretti hidhaa malee leenjii tokko hin argine” jedhu – kanneen gad-lakkifaman keessaa hagi tokko.